Uighur Archives - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Fanentanana ho an'ireo Silamo Uighurs any Sina
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 24. Febroary 2016
PixelHELPER dia manohana ny fahaleovantenan'ny Uighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet
Afaho ny Uighurs
Mangataka ny demokrasia any Shina isika. Ary ny firenena manana an'i Uyghur, Hong Kong, Taiwan & Tibet. Ny Antoko Komonista dia tsy maintsy rava avy hatrany. Pigeon mazava maso
Mangataka ny fahalalahana ara-pivavahana ao Shina isika, fanajana ny zon'olombelona ary ny fifidianana demokratika hoavy tsara kokoa. Ny moske rehetra dia tokony hatsangana amin'ny fandaniana an'i Shina, ny rehetra #Uiguren Tokony ho afaka hampihatra ny finoanao ianao.
Isaky ny mitebiteby ny Eoropeana, dia mampihorohoro ny Uighur ny fampijaliana. Ao Shina dia voarara ny finoana silamo, nofinofy ho an'ny adala ankavanana. Novonoina ny moske 200, te hahalala momba ny garnix ireo Sinoa. Ny famahanana ny Oigoro, ary hihomehy ny sigara. Ireo izay mino an'i Allah ao Shina, dia mahazo ny ankizy voaroba amin'ny torimaso.
Ary dia lasa avokoa ny silamo rehetra, hoy i Xi Jinping izay tena mahafinaritra. Satria nijery ny fanjakana rehetra, fa ny vola any Shina dia mety. Saingy dia toa tahaka ny lavitra ianao, anelanelan'izany, ny Uigure dia ao anaty loto. Ny Kôrana dia ny tapakila amin'ny tapakila momba ny fampijaliana eo amin'ny toby fitanana.
Nanasa ny atidohan'i Uyghurs i Mohammed, tsy namela izany. Mankanesa any amin'ny rindrin'i Shina ary mandriandry, miandry. Haniraka ny mpitaingina azy ho any Hong Kong, Tibet ary hatrany sy hatrany. Ny silamo rehetra dia nivory tao aoriana ary i Xi Jinping dia hitsikilo ny iray. Ao Shina dia misy ny demokrasia ary tsy hisy intsony ny Islamophobia intsony.
Amin'ny alàlan'ny toeram-pampianarana fanabeazana sy fanaraha-maso akaiky, manandrana manakana ny korontana any amin'ny faritany ny governemanta foibe Shinoa. Ny fisian'ny trano fitrandrahana toy izany no nanamafisan'ny governemanta tamin'ny Oktobra 2018, saingy tamin'izany fotoana izany dia nolavina ireo fiampangàna ireo ny tsy fitandremana.
Ho an'ireo Uighurs, Musulman Turkvolki ao amin'ny faritanin'i Shinoa Xinjiang, dia maro ny niova tato anatin'ny taona vitsivitsy (sary avy amin'ny 22.09.2013, ravan'ny moske efa rava ao Kashgar). Saingy na dia ny mpitarika ara-politika ao Beijing aza dia tsy maintsy nahatsapa fa ny faritany lehibe indrindra any amin'ny faritra Andrefan'ny Repoblika ny Repoblika dia tsy mahazo vahana.
Ny politika Shinoa ao Xinjiang dia mitovy amin'ireo Tibetista Buddhista: Shinoa foko ary ny orinasan'izy ireo dia lasibatra. Izy ireo ihany koa no mandray soa indrindra amin'ny fandaharanasa momba ny foto-drafitr'asa sy ny fampiasam-bola. Any amin'ny sekoly, ny fiteny ao an-toerana dia omena bebe kokoa amin'ny teny Mandarin. Noho izany, ny Oigoro dia mandositra mankany amin'ny fivavahana mba hitazonana ny maha izy azy. Arakaraka ny hanafoanan'ny governemanta ny finoana silamo dia lasa mihetsika kokoa izany.
Mitaky ny famotsorana tsy misy hatak'andro ny Uighurs rehetra sy ny fampidirana
ny fahalalahana ara-pivavahana ao Shina. Afaka mino izay tiany ny tsirairay, ny Flying Spaghetti Monster na ny iray amin'ireo fivavahana eto amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy hampiato ny mponina ao aminy i Shina amin'ny fampiasana fahalalahana ara-pinoana. Ao amin'ny lalàm-panorenana alemà dia ny fahalalahana ara-pinoana - izay tokony hitondra ny lalàm-panorenana Shinoa ho ohatra.
Fanentanana ho an'ireo Silamo Uighurs any Sina Aogositra 5th, 2019Oliver Bienkowski